N'ogbe nkwakọba ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | N'oge
Nye oru nkwakọba ihe nke ọma, nchekwa na n'efu na China Anyị nwere ụlọ nkwakọba ihe 3000 + nke dị na Guangzhou ， Na-enye nnwere onwe maka ọnwa atọ maka ndị ahịa ọhụrụ, yana n'efu mgbe ọnwa 3 ...
Anyị nwere ụlọ nkwakọba ihe 3000 + na mita square na Guangzhou er Nye n'efu maka ọnwa atọ maka ndị ahịa ọhụrụ, yana n'efu mgbe 3months dabere na ị nwere ma ọ dịkarịa ala 60Pcs iwu mbupu kwa ọnwa house ụlọ nkwakọba ihe 3000m² nwere ike izute ngwa ahịa gị na-eto eto chọrọ ， ngwa ngwa hazie gị ịtụ ma kwadebe maka mbupu. Anyị nkwakọba na-gị na ngwaahịa mma ， zuru ezu na 24/7 nche onyunyo na mkpuchi.
Step1 ： Nkwakọba Renata Ngwaahịa
Ihe ikwesiri ime bụ ijupụta ọkwa mbupute dị elu (ASN) tupu ị zipụ ngwa ahịa ndị na-ebubata gị n'ụlọ nkwakọba ihe anyị. N'ụzọ dị otú a, usoro nkwakọba ihe anyị ga-ama ngwaahịa gị na oke gị, ma nwee ike ịnata nnata na nhazi oge.
Nzọụkwụ 2. Inyocha & Nyochaa Ngwaahịa
Warelọ nkwakọba ihe anyị na-anata ndị ọrụ ga-agụta ọnụọgụ na ogo nke ngwaahịa tupu ụlọ nkwakọba ihe iji hụ na izi ezi nke ọnụọgụ na ogo ngwaahịa, wee belata mbibi omenala gị na ọnụọgụ ụlọ ahịa. A ga-eji koodu mmanya tinye ihe ọ bụla, a ga-enyocha ihe dị oke ọnụ ma chekwaa iche iche iji hụ na enweghị mmejọ na ụlọ nkwakọba ihe na buru.
Step3: Stchekwa na GZ Ontime Warehouse
Ọ bụrụ na iwu E-Azụmaahịa gị dị n'akụkụ ụwa niile, nchekwa na China bụ nhọrọ kacha mma. N'ihi na ọnụahịa nke iji ụlọ ọrụ nkesa ụlọ nkwakọba ihe anyị dị obere na njem njem na-agba ngwa ngwa.
GZ Ontime nwere usoro nlekọta ụlọ nkwakọba ihe dị elu (WMS) maka njikwa ngwa ahịa na njikwa ahịa. Anyị na-ahụ na izi ezi nke ngwa ahịa dị elu karịa 99%. Ndepụta ngwongwo na-adaba adaba maka gị iji nyochaa ọtụtụ ngwakọ ngwaahịa ma mejupụta ngwa ahịa n'oge iji gbochie ụkọ.
Nke gara aga: Nzipu ozi
Osote: Elinyefe Railway